waizviziva here - zvichigonesa bluetooth mune isiri-yekutsvaga nzira haina & apos; kudzivirira kudzivirira kune yako smartphone
Kuru Nhau & Ongororo Waiziva here - kugonesa Bluetooth mune isiri-yekutsvaga modhi haina & apos; kudzivirira kudzivirira kune yako smartphone
Vamwe vashandisi veApplephone vanofarira kuve neBluetooth yakavhurwa, asi chengetedza zvigadzirwa zvavo musinga-zivikanwe modhi saka mamwe magajeti akabatana haazovabate. Zvinoitika izvi chengetedzo ingori ngano, uye kuchengetedza chishandiso chako chisingawanikwe hachizodzivirirwe zvizere nevashushi vakatsunga kupaza foni yako. Kune scanner uye sniffer zvishandiso zviripo izvo zvinowana yako kifaa & apos; s Bluetooth kero uye rega kupinda mukati kutange kunyangwe kana yaiswa kune isinga-zivikanwe.
Bheji yako yepamusoro ichiri kuchengeta Bluetooth kure. Kunetseka kwakakomba kunorerutsa maitiro ndeye 'fekitori' default password inoshandiswa pane mazhinji emidziyo yeBluetooth, chinova chinhu kune tune ye '0000' kana '1234'. Pane mumwe munhu akakwenya kero yako yeBluetooth, mikana ndeyekuti vanogona kumisikidza kubatana vachishandisa iyi PIN kodhi. Sekureva kwevanotsvaga zvekuchengetedza, iyi & apos; s iyi isinganzwisisike yakareruka sisitimu iyo inogadzirisa zviitiko zvakawanda zveBluetooth evesdropping uye inonzi 'Bluejacking' - kubatanidza kune foni uye kutumira zvemukati zve spam. Saka chimwe chezvinhu zvirinani zvaunogona kuita mune izvi kushandura yako Bluetooth password kuenda kune yakaderera PIN.
Maitiro anoenda aya ndeekuti vashandisi vezvivakwa vanovimba neruzivo rweBluetooth Kero Kero (BD_ADDR) ruzivo senzira yekuchengetedza. Inoshanda mumodi inowoneka, zvishandiso zveBluetooth zvinopindura meseji yekukumbira peji yakaburitswa nemamwe magajeti ane yavo BD_ADDR ruzivo Mune isiri-inowanikwa maitiro, zvakadaro, BD_ADDR ruzivo rwekukumbira harufuratirwe. Zvinogona kunge zvine njere, asi zvishandiso zviri mumamiriro anoonekwa zviri panjodzi zvakanyanya sezvo zvichizivikanwa zviri nyore nemidziyo yakadai seBTScanner iyo inotumira yakadzokororwa peji yekukumbira mameseji kune ese maBluetooth michina iri munzvimbo
Ndeapi maapos anotora pano? Kuchengeta michina yeBluetooth isingawanikwe ichiri tsika yakanaka, asi haina kuzokumisa varwisi. Ivo vanokwanisa kutumira con chikumbiro mameseji kune ese akajairwa BD_ADDR chivakamberi kana OUI kusvikira yakazara BD_ADDR yazivikanwa. Zvimwe izvo, kana ivo vanogona kushandisa rondedzero yakajairika BD_ADDR zvimiro zvekutanga izvo zvinoita kuti anorwisa ayedze ese anozivikanwa eBluetooth OUI kukosha mukati memaminitsi mashoma kana maviri. Pakupedzisira, Bluetooth inonyanya kusiyiwa yakadzimwa kunze kwekunge iwe & apos; uchishandisa iyo kubatanidza chishandiso kana kuendesa ruzivo.
mabviro: PASINA Tech Institute kuburikidza MakeUseOf
mutsauko pakati pekuremerwa uye kuyedzwa kwekuita
Verizon inononoka Samsung Gear S3 Frontier smartwatch kusvika pakupera kwaJune
Maitiro ekudzima KnockON (kaviri pombi kumuka) pane LG G4, LG V10, mamwe mafoni e LG
Lollipop inogadziridza iyo Galaxy S4 inotanga kuburitswa muIndia, firmware yeiyo Exynos variant yava kuwanikwa kurodha pasi.
Samsung Galaxy S10e vs Galaxy S10 vs Galaxy S10 +: ndeipi iri yakanakira iwe? Bonus: Mirira Galaxy S10 5G?